Singabantu abanolwazi lwe-FBA Sourcing, PREP kanye ne-QC e-China, esineminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho ekutholeni, ekulungiseleleni nasekuthumeleni imikhiqizo ezindaweni zokugcina izimpahla ze-Amazon FBA.Sisebenzela abathengisi be-e-commerce abaqeqeshiwe nabathengisi be-Amazon emhlabeni wonke ngesevisi ye-Goodcan.Thola okwengeziwe mayelana nezinsizakalo ze-FBA Sourcing China.
Isevisi yethu ye-FBA Sourcing China ikuvumela ukuthi uphumule futhi usivumele senze yonke inqubo.Ukuqala ngabahlinzeki, kuze kufike ekuletheni ngqo endaweni yokugcina impahla yase-Amazon.Sikwenzela yonke into.Okufana, ukuklama, ukupakisha, ukulebula, izitifiketi nokunye okuningi.
Mayelana nesevisi yangemuva kokuthengisa
Uma usuvele uthenga imikhiqizo yakho kubakhiqizi baseShayina, singakuhlinzeka ngezinsiza ezahlukene ukuze sikuthuthuzelele inqubo.Sizokwenza ukuhlola umkhiqizo, ukulebula, ukupakisha, ukuhlanganisa kanye nanoma yikuphi okunye ukulungiswa kwe-FBA okudingayo ngomkhiqizo wakho.
Mayelana Nokuhlola Nokulawulwa Kwekhwalithi
Uma udinga usizo lokulethwa, sikusevisi yakho.Singasiza ekuthumeleni ngaphakathi kwe-China, ukuthumela ezinqolobaneni ze-Amazon FBA e-USA, Europe, ukuthumela endaweni yakho yokugcina impahla, njll. Singasiza ngokulethwa komoya osheshayo, noma ukulethwa olwandle;ngokwezidingo zakho.
Mayelana Nokusabalalisa Ngomkhumbi
Ukuthola i-FBA kuwumsebenzi obaluleke kakhulu kumthengisi wase-Amazon, futhi kuthatha isikhathi… isikhathi esiningi… Ngakho silapha ukuze sisize!
Uma sinephrojekthi entsha yokuhlonza ezayo, ithimba lethu lizothola umkhiqizo, libhekane nazo zonke izici zokuthenga, ukuqinisekiswa kwekhwalithi, izitifiketi (i-FDA, i-FCC, i-SGS, njll.), izinto zokumaketha (izithombe, idizayini yephakheji kanye nokukopisha) , ukuhlolwa komkhiqizo, ukulungiswa komkhiqizo we-FBA, ukulungiselela ukuthunyelwa kwe-FBA, ukuthumela, amasiko ase-US, njll. Umphathi weqembu lethu uzokugcina unolwazi ngaso sonke isikhathi.Uzobe uzenzela esakho isinqumo lapho usendleleni (ukuqala ngamanani, ilogo kanye nokwakheka kwezithombe, ukuthwebula izithombe komkhiqizo, izinketho zokulethwa).
·Ufuna ukungenisa usuka e-China kodwa awazi ukuthi ungaqala kanjani?
·Ufuna ukuthola amanani ancintisanayo kodwa awazi ukuthi iyiphi imboni ethembekile?
Uhlala uthola isicaphuna sokuncintisana esivela kithi
Qonda uhlelo lochwepheshe